Wararka - Ku Saabsan Tignoolajiyada Shaqada Saxda ah ee Caaryada ee Siinc Alloy Die Casting
Ku Saabsan Tignoolajiyada Shaqada Saxda ah ee Caaryada ee Siinc Alloy Die Casting
Habka wax-soo-saarka: Dhimashada Jilitaanka. Si loo badbaadiyo kharash badan wax soo saarka ballaaran, tayada sare iyo xasilloon.
Saxnaanta QY waxay khibrad u leedahay dhammaan noocyada wax soo saarka qaybaha, soo dhawoow soo dir su'aal.
Sida qalab geeddi-socod oo muhiim ah, caaryada waxay ku jirtaa boos muhiim ah warshadaha warshadaha sida alaabta macaamiisha, korantada iyo elektiroonigga, baabuurta, iyo wax soo saarka diyaaradaha. Hagaajinta heerka farsamada iyo tayada wax soo saarka caaryada waa arrin muhiim u ah warshadaha wax soo saarka caaryada. Isticmaalka tignoolajiyada goynta xawaaraha sare ee caaryada waxay si weyn u wanaajin kartaa hufnaanta wax soo saarka caaryada, saxnaanta caaryada iyo nolosha adeegga, sidaa darteed si tartiib tartiib ah ayey u bedeshaa caaryada EDM, waxaana si weyn u qaatay shirkadaha wax soo saarka caaryada shisheeye, iyagoo noqday isbeddel weyn oo wax soo saarka caaryada. Waqtiga codsiga ee tiknoolajiyada goynta-xawaaraha sare leh ee wax soo saarka caaryada waa mid gaaban, iyo shuruudaha farsamada ee isticmaalka ayaa ah mid aad u sarreeya.
Tignoolajiyada goynta xawaaraha sare leh
Goynta xawaaraha sare waxay leedahay faa'iidooyinka kor u kaca heerkulka hooseeya (workpiece kaliya ayaa kordhay 3 ° C), qallafsanaanta kulaylka yar, iwm. Heerka saarista birta ee halbeeg kasta waxaa kordhay 30% ilaa 40%, xoogga goynta ayaa la dhimay. 30%, iyo nolosha goynta qalabku waa la kordhiyaa. 70%, kulaylka goynta ee ku hadhay shubanka aluminiumka zinc ayaa si weyn loo dhimay, iyo gariirkii goynta-hooseeya wuxuu ku dhawaaday inuu baaba'o. Iyada oo kororka xawaaraha goynta, heerka saarista alaabta bannaan halkii halbeeg ayaa kordheysa, waqtiga goynta ayaa hoos u dhacaya, iyo waxtarka wax soo saarka ayaa kordha, sidaas darteed hoos u dhigista wareegga wax soo saarka alaabta iyo hagaajinta tartanka suuqa ee alaabta. Isla mar ahaantaana, mashiinada xawaaraha sare ee mindida fudud iyo heerka quudinta weyn waxay yaraynaysaa xoogga goynta ee ku shaqeynaya workpiece, iyo dheecaanka xawaaraha sare ee chips wuxuu yareeyaa kulaylka goynta ee loo gudbiyo workpiece, wuxuu yareeyaa cadaadiska kulaylka iyo qallafsanaanta. , sidaas darteed hagaajinta habka of zinc alloy Die-casting Rigidity, oo waxay siisaa suurtogalnimada in la gooyo qaybo dhuuban. Dhaqdhaqaaqa aadka u sarreeya ee alaabta leh engegan ka badan HRC60 waxay bedeli kartaa waxtarka hoose ee EDM ilaa xad, sidaas darteed soo gaabinaysa wareegga wax soo saarka caaryada ilaa xad. Isla mar ahaantaana, codsiga tignoolajiyada goynta-xawaaraha sare leh waxay badbaadin kartaa qiyaastii 80% wakhtiga wax lagu shiido buug-gacmeedka ee habka soo socda ee caaryada, badbaadinta kharashka wax-qabadka ee ku dhawaad ​​​​30%, qallafsanaanta dusha sare ee caaryada waxay gaari kartaa Ra0. 1, iyo waxtarka goynta qalabka waa la labanlaabmi karaa.
Faa'iidooyinka goynta xawaaraha sare leh ayaa lagu dabaqay farsamaynta caaryada
Astaamaha farsamaynta caaryada waa dufcyo yaryar oo hal-xabbo ah iyo qaabab joomatari oo adag, sidaa daraadeed wareegga wax-soo-saarka ayaa dheer, waxtarka wax-soo-saarka ayaa hooseeya. Farsamada farsamaynta caaryada dhaqameed, dhamaystirka caaryada adag waxay caadi ahaan isticmaashaa EDM iyo tignoolajiyada nadiifinta gacanta. Gaabinta wakhtiga habaynta iyo dhimista kharashaadka wax soo saarka ayaa ah yoolalka ugu waaweyn ee horumarinta tignoolajiyada farsamaynta caaryada. Sanadihii la soo dhaafay, waxaa jiray teknoolojiyad badan oo cusub oo ku saabsan tignoolajiyada farsamaynta caaryada, sida goynta xawaaraha sare leh, jilitaanka naqshadaynta CAD/CAE, wax-soo-saarka degdegga ah, qaabaynta dareeraha dareeraha korantada iyo farsamaynta isku-dhafka ah, oo ay ka mid yihiin kuwa ugu indhaha iyo waxtarka badan ayaa sarreeya. Habka Goynta xawaaraha.
Xawaaraha-xawaaraha sare leh ee jarista waxay isticmaalaan xawaaraha sare iyo heerka quudinta sare ee qalabka mashiinka si ay u dhamaystiraan hababka wax soo saarka badan ee caaryada iyadoo la jarayo. Faa'iidooyinka mashiinnada xawaaraha sare leh ayaa inta badan lagu muujiyaa dhinacyada soo socda:
① Mashiinka qallafsan ee goynta-xawaaraha sare leh iyo mashiin-dhammeedka-dhammaystirka waxay si weyn u wanaajiyaan heerka saarista birta.
②Isticmaalka qalabka mashiinka goynta xawaaraha sare leh, qalabka iyo tignoolajiyada, waxay farsamayn kartaa walxaha adag. Dhalooyinka yar yar ee wax shubaya, ka dib marka walxaha la daaweeyay kulaylka, qallafsanaanta iyo dhamaystirka ayaa lagu dhammayn karaa hal xajin; Caaryada waaweyn ee shubka-dhimista, roughing iyo semi-dhammaynta ayaa la sameeyaa ka hor daaweynta kulaylka, iyo dhamaystirka waxaa la sameeyaa ka dib daaweynta kulaylka iyo qallafsanaan.
③Xawaaraha sare iyo goynta adag ee saxda ah ee saxda ah waxay beddeshaa fududaynta, yaraynta waqti badan oo wax lagu shiidi karo, iyo hagaajinta waxtarka 50% marka la barbar dhigo EDM.
④ Habka goynta adag ee dusha sare ee ugu dambeeya si loo hagaajiyo tayada dusha sare iyo qaabka saxda ah (ma aha oo kaliya qallafsanaanta dusha sare waa mid hooseeya, laakiin sidoo kale iftiinka dusha sare waa mid sare), taas oo faa'iido badan u leh farsamaynta caaryada ee dusha qalooca adag.
⑤Waxay ka fogaataa decarburization-ka, gubashada iyo dildilaaca-yar-yar ee ay keento dhimbiil koronto iyo shiidid, waxay si weyn u yaraynaysaa dhaawaca dusha sare ee caaryada ka dib, waxayna kordhisaa nolosha caaryada 20%.
⑥ Qalabka shaqada wuxuu leeyahay kulayl yar, hoos u dhaca xoogga goynta, iyo qallafsanaanta kulaylka yar. Waxa loo istcimaalay in lagu daro tignoolajiyada CAD/CAM si degdeg ah loogu farsameeyo elektrodes-yada, gaar ahaan electrodes-ka leh qaabab adag iyo korantado si fudud u qallafsan.
Qalabka mashiinka goynta-xawaaraha sare leh ee farsamaynta caaryada
Markaad dooranayso qalabka mashiinka xawaaraha sare leh ee jarista xawaaraha sare leh, fiiro gaar ah u yeelo arrimaha soo socda:
(1) Qalabka ugu muhiimsan ee mashiinka mashiinka ayaa looga baahan yahay inuu yeesho awood sare iyo xawaare sare si uu ula kulmo mashiinnada qallafsan iyo kuwa wanaagsan. Qalabka dhexroorka yar waa in loo isticmaalo dhamaystirka caaryada, xawaaruhuna wuxuu gaari karaa in ka badan 15,000 ilaa 20,000 rpm. Aaladaha mishiinka ee xawaarahoodu ka hooseeyo 10000rpm waxa ay samayn karaan farsamayn qallafsan iyo mashiin-dhammeedka. Haddii aad u baahan tahay inaad la kulanto mashiinnada qallafsan iyo dhammaystirka labadaba wax soo saarka caaryada waaweyn, qalabka mashiinka la doortay waa inuu doorbidaa inuu haysto laba xadhig oo leh laba xawaarood, ama laba qeexitaanno dhejisyo koronto ah.
(2) Socodka degdega ah ee qalabka mishiinku uma baahna istaroog degdeg ah oo degdeg ah. Laakin waa in ay lahaataa xadiga quudinta habayntiisu aad u sarayso (30-60m/min) iyo dardargelin sare iyo hoos u dhac.
(3) Waxay leedahay xawaare sare oo wanaagsan, nidaamka xakamaynta saxda ah ee saxda ah, waxayna leedahay shaqooyinka isdhexgalka saxda ah ee saxda ah, kontoroolka horudhaca, dardargelinta sare, iyo xakamaynta booska saxda ah.
(4) Dooro software-ka CAD/CAM ee ku habboon qalabka mishiinada xawaaraha sare leh, gaar ahaan softiweerka loogu talagalay jarista xawaaraha sare leh.
Codsiga qalabka mashiinka shan-dhidibka ee wax-soo-saarka caaryada ayaa si tartiib tartiib ah u kordhaya, waxayna leedahay faa'iidooyinka soo socda si ay ula shaqeyso xawaaraha sare ee jarista:
①Xagalka goynta ee qalabka waa la bedeli karaa, shuruudaha goynta ayaa wanaagsan, xirashada qalabka waa la dhimay, taas oo faa'iido u leh ilaalinta qalabka iyo sii dheereynta nolosha qalabka;
②Dariiqa habayntu waa dabacsanaan, kaas oo yaraynaya faragelinta qalabka, oo ka shaqayn karta caaryada leh qaabab dusha sare leh iyo caaryada dalool qoto dheer;
③ Kala duwanaansho ballaaran, oo ku habboon farsamaynta noocyada kala duwan ee caaryada.
(Xarunta mishiinada mishiinada xawaaraha sare leh ee shanta dhidibka ah)
Qalabka mishiinka shanta dhidibka ah sida caadiga ah waxay leeyihiin laba nooc: nooca miiska iyo nooca madaxa wax lagu shiido, kaas oo lagu dooran karo nooca caaryada.
Tiknoolajiyada qalabka ee goynta xawaaraha sare leh ayaa dhinta
Mashiinka xawaaraha sare wuxuu u baahan yahay in lagu qalabeeyo qalab ku habboon. Codsiga qalabka dahaarka adag ee dahaarka ah iyo polycrystalline ee la xoojiyay qalabka dhoobada ayaa suurtogal u ah in qalabku uu yeesho labadaba lakab adag iyo matrix adag oo isku mid ah, kaas oo kor u qaadaya horumarinta mashiinnada xawaaraha sare leh. Adreeska polycrystalline cubic boron nitride (PCBN) garbaha wuxuu gaari karaa 3500～4500HV, iyo engeganaanta dheeman polycrystalline (PCD) waxay gaari kartaa 6000-10000HV. Gaar ahaan qalabka dahaarka leh ayaa door weyn ka ciyaara dhamaystirka nus-dhamaadka iyo dhamaystirka birta adag.
Guud ahaan marka la dardargaliyo qalabka iyo xajiyaha qalabku ay ka sarreeyaan 3g, shucaaca radial ee qalabku waa inuu ka yaraado 0.015mm, dhererka qalabkuna waa inaanu ka badnayn 4 jeer dhexroorka qalabka. Waayo-aragnimada mashiinnada saxda ah ee xawaaraha sare ee gudaha ee caaryada, marka la isticmaalayo gooyayaasha kubbadda-dhamaadka-yar ee dhexroor-yar ee gooyayaasha wax-shiidka ee dhammaystirka caaryada, xawaaraha toosan wuxuu ka sarreeyaa 400m/daqiiqo. Tani waxay leedahay shuruudo sare oo loogu talagalay qalabka qalabka (oo ay ku jiraan qallafsanaanta, adkaanta, qallafsanaanta cas), qaabka qalabka (oo ay ku jiraan waxqabadka saarista chip, saxnaanta dusha sare, dheelitirnaanta firfircoon, iwm) iyo nolosha qalabka. Sidaa darteed, goynta adag ee xawaaraha sare leh iyo dhamaystirka caaryada, ma aha oo kaliya qalabka mashiinka xawaaraha sare leh waa in la doorto, laakiin sidoo kale qalabka wax lagu gooyo iyo hababka goynta waa in si macquul ah loo doortaa.
Marka lagu shaqeynayo caaryada xawaare sare, dhinacyada soo socda waa in fiiro gaar ah loo yeesho:
①Sida laga soo xigtay walxaha farsamaynta ee kala duwan, si macquul ah u dooro qalabka carbide-dahaarka leh, CBN iyo aaladaha dheemanka dheeman.
② Dhexroorka yar ee wax lagu shubo kubbadda-dhamaadka ayaa loo isticmaalaa in lagu dhammeeyo dusha caaryada, badiyaa dhexroorka qalabka wax lagu dhammeeyo wuxuu ka yar yahay 10mm. Iyada oo ku xidhan walxaha lagu farsameeyo iyo adkaanta, dhexroorka qalabka la doortay ayaa sidoo kale ka duwan. Xulashada agabka aaladaha, TiAIN aadka u-fiican ee hadhuudhka ah ee carbide-dahaarka leh ayaa leh xaalado sifeyn wanaagsan. Markay goynayaan birta dhinta, waxay leeyihiin iska caabin ka fiican marka loo eego qalabka TiCN carbide ku dahaadhay.
③Dooro cabbirada aaladaha ku habboon, sida xagal qaawan oo taban. Qalabka farsamaynta xawaaraha sare wuxuu u baahan yahay iska caabin saameeyn sare leh iyo iska caabin shoog kulayl ah marka loo eego mashiinada caadiga ah.
④ Qaado habab kala duwan si loo horumariyo nolosha qalabka, sida heerka quudinta habboon, habka quudinta, habka saliidaynta, iwm, si loo yareeyo kharashka qalabka.
⑤Isticmaalka qalabka xawaarihiisa sareeyo Waqtigan xaadirka ah, qalabka HSK-haysta iyo qalabka saxaafadda kulul ayaa ah kuwa ugu isticmaalka badan. Isla mar ahaantaana, waa in fiiro gaar ah loo yeesho isku dheelitirnaanta firfircoonida guud ee nidaamka lafdhabarta ka dib marka qalabka lagu xiro.
Waqtiga boostada: Agoosto-03-2021